Ndedzipi Ndidzo Nzira dzeKushambadzira? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweDropshipping Course
Nezve Kudonhedza Academy Marketing nzira dzingatevedzwa chii
Ndedzipi Ndidzo Nzira dzeKushambadzira?
Kushambadzira kana Kushambadzira chikamu chakakura chebhizimusi rako, uye zvakakosha kuti uzive zvese sarudzo iwe yaunowana. Kushambadzira kunokutendera iwe kuti usvike vangangoita vatengi uye vatengi pasirese uye inogona kubatsira kuvaka yako mhando paunenge uchityaira kukura. Inotevera ichaunza iyo gumi nemaviri nzira dzakakosha dzekushambadzira kuti ikubatsire kuwana vateereri. Izvi zvinosanganisira Email Kushambadzira, Zvemukati Kushambadzira, Yemagariro Media Kushambadzira, Izwi-re-Mukanwa Kushambadzira, Chiitiko Kushambadzira, Yekutsvaga Injini Kushambadzira, Chiitiko Kushambadzira, Ukama Kushambadzira, Kuzvimiririra Kushambadzira, Chikonzero Kushambadzira, Co-Branding Kushambadzira, Yekusimudzira Kushambadzira.
Mabhizinesi mazhinji akakura anoshandisa kushambadzira kweemail senzira yakatwasuka uye inoshanda yekubatana nevatengi. Iwe unogona kutumira maemail ane mhando dzakasiyana dzezvinyorwa kune runyorwa rwevanonyoresa, senge ruzivo nezvekutengesa, kudzikisira, coupon kodhi, chigadzirwa kutengesa nezvimwewo. Izvi zvemukati zvinokwanisa kushandira kugadzira webhusaiti traffic, zvinotungamira, kana kunyangwe chigadzirwa kusaina-kumusoro kune bhizinesi. Anoshanda ekushambadzira maemail anogona kushandura tarisiro kuva vatengi, uye kushandura-kamwe-nguva vatengi kuva vakavimbika, vanopenga mafeni. Pamaindasitiri ezvokutengeserana anoratidza, varapi veBMM vanowanzoonekwa vachichinjana ruzivo rweemail netarisiro yavo. Uye kune mitsara inoratidza email ine yakakwira ROI yechero yekushambadzira chiteshi chiripo.
2. Zvokutengesa Zviripo
Zvemukati kushambadzira zvakanaka mukugadzira buzz. Inosanganisira kugadzirwa uye kugoverwa kwezvinhu zvepamhepo izvo zvingangodaro zvisinga nyatso kusimudzira imwe mhando asi zvinounza kufarira zvigadzirwa kana masevhisi ayo. Kazhinji munyika yeCommerce, iwe unowanzoona "chigadzirwa ongororo 'mavhidhiyo. Nekudaro iyi mhando yekutengesa haina kuganhurirwa kune iyi fomati, kazhinji ichiwedzera kusvika mumablog nemagariro enhau. Kunyangwe iyi nzira isingavimbise shanduko inonyatso kutyaira traffic. Izvo zvinogona kukukwiridzira iwe kumusoro muinjini dzekutsvaga mukufamba kwenguva uchivaka vateereri. Isu tinokurudzira kusanganisa iyi nzira mumatanho ekutanga emakampeni ako ekushambadzira. Asi kwete iyo yega nzira yekushambadzira, ingori chikamu chimwe muhurongwa hwese.
Bhizinesi rega rega rine nhoroondo yemagariro enhau uye rinogara richishandiswa kushambadzira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi. Facebook, Twitter, Youtube, uye Instagram kazhinji ndiyo nzira yakanakisa yekusvikira vatengi vako. Chikamu chega chega chakasiyana uye chinofarira kuendesa kune yakasarudzika mhando yezvinyorwa. PaFacebook, mablogiki ndiwo akakosha zvemukati. PaYouTube, vhidhiyo inotonga. Uye pa Instagram, mifananidzo inokunda zuva. Mazhinji enhau enhau mapuratifomu zvakare akavakira-mukati data analytics maturusi, ayo anogonesa makambani kuteedzera kufambira mberi nekubatana kwemashambadziro eshambadziro. Uye makambani akaita seSouthwest Airlines ane madhipatimendi evanopfuura vanhu makumi matatu vane basa rekutanga nderekushingairira kuita nevatengi pasocial media.
4. Shoko-reMuromo Kushambadzira
Kushambadzira-kwemuromo-kutaura ndiko kupfuudza ruzivo kubva kumunhu kuenda kune mumwe nekutaurirana kwepamhepo nekunze. Chikonzero chakajairika ndechekuti mutengi paanoona chimwe chinhu kupfuura zvinotarisirwa. Kunyangwe icho chiri icho chigadzirwa kana sevhisi pachayo kana kudyidzana pakati pebhizinesi nemutengi. Iwe unowanzoona mhedzisiro yeshoko-remuromo kushambadzira kana mutengi achigovana ruzivo rwavo pasocial media kana blog blog. Vanhu vanofarira kugovana, kunyanya zvinhu zvine chekuita nehukama hwavo. Uye vatengi vazhinji vanowana chirevo mukugovana nyaya dzezvinhu zvavanofarira zvigadzirwa nemasevhisi. Yekuongorora webhusaiti iyo inopetwa sehumboo hwemagariro zvakare iri fomu reizwi-remuromo. Iyo inogona kukubatsira iwe kukwezva uye kushandura vamwe vatengi.
5. Chiitiko Chekushambadzira
Chiitiko kushambadzira inzira inokoka vatengi kuti vatore chikamu mukushanduka kwechiratidzo kuburikidza nekubatana kwakananga. Mune mamwe mazwi, zvinoreva pfungwa yekushandisa chiitiko chaicho kugadzira chinongedzo chisingakanganwike pakati pemutengi nechiratidzo. Funga maererano nemakwikwi, meetups, kana Imwe Reality Mutambo. Izvi ndizvo zviitiko izvo pakupedzisira zvinotyaira chiziviso cheruzivo, kuvimbika, uye kushushikana kwepamoyo. Zvakare, ichishandisa kutora chikamu, maoko-on, uye zvinobatika zvekumaka zvinhu, bhizinesi rinogona kuratidza vatengi varo kwete kwete izvo zvinopihwa nekambani, asi izvo zvarinomirira.
6. Kutsvaga Injini Kushambadzira
Yekutsvaga injini yekushambadzira inzira yekushambadzira yedhijitari inoshandiswa kuwedzera kuoneka kwewebhusaiti pamapeji enjini dzekutsvaga. Kugadzira yakasarudzika, yakakosha, uye data-inotyairwa zvemukati zvinogona kuita kuti zvemukati zvako zvinyanye kufadza kune injini dzekutsvaga. Iwe unogona zvakare kugadzira yakakura ROI kuburikidza nekutsvaga injini optimization. Izvo zvinoshanda kugadzirisa yako meta tag, mifananidzo, uye zvimwe zviri-peji zvinhu kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana zvemukati zvako kuburikidza nerefu-muswe mazwi akakosha. Izvo zvinosanganisirawo PPC kushambadzira inova nzira yekuwana webhusaiti traffic nekutenga kushambadza pane dzekutsvaga injini uye inobhadharwa nekudzvanya.
7. Chiitiko Kushambadzira
Chiitiko kushambadzira iri apo bhizinesi rinogadzira iwo themed kuratidza, kuratidza, kana mharidzo yekusimudzira chigadzirwa, sevhisi, chikonzero, kana sangano rinotungamira mune-munhu kubatanidzwa. Kuvandudza zviitiko inzira huru yekuwana tarisiro uye kutyaira kutengesa uye ine yakanaka yekutaurirana maitiro. Vatengi vanowanzo kuda chikonzero chekutenga uye zviitiko zvinowanzo kupa chikonzero chakazara. Zviitiko zvinogona kuitika online kana isingaenderane uye zvinogona kutora chikamu mukati, kuitirwa, kana kutsigirwa.
8. Ukama Kushambadzira
Ukama kushambadzira inotarisa pakuvaka hukama nevatengi vayo uye kuve neyakareba vatengi kuitisa. Izvo zvishoma transactionional pane echinyakare kushambadzira nzira. Haisi laser-yakanangana nekuvhara kutengesa kumwe kana kuita kumwe kutendeuka. Icho chinangwa chehukama kushambadzira ndechekugadzira yakasimba, kunyangwe yemanzwiro, kubatana kwevatengi kune iyo brand iyo inogona kutungamira kune inoenderera bhizinesi, yemahara izwi-remuromo muromo uye ruzivo kubva kune vatengi vanogona kugadzira zvinotungamira. Vatengi vanoda brand yako zvakanyanya uye vane brand brand vanozoshandisawo imwe mari nechako brand.
9. Kushambadzira Kwega
Yekushambadzira yakasarudzika, inozivikanwawo seye-kune-imwe kushambadzira kana kushambadzira kwega, kupa musiyano wechigadzirwa kana kuendesa mameseji akasarudzika kune akasiyana vatengi maererano nezvavanoda kana zvavanofarira. Kugadziriswa kwemunhu kunoedza kuita chakasarudzika chipiro kumutengi wega wega. Yekushambadzira yakasarudzika ndiyo inonyanya kutarisa nzira yekutengesa yakanangwa pane kukwezva kune yakazara huwandu kana vateereri. Chinangwa chayo ndechekuita zvechokwadi vatengi kana vanotarisira vatengi nekutaurirana neumwe neumwe semunhu. Iyi nzira inowanzo shanda zvakanyanya pazvinhu zvihombe-zvetikiti kana masevhisi uye zvinowanzo shanda pamwe chete nehukama kushambadzira.
10. Chikonzero Kushambadzira
Chikonzero kushambadzira zano kunoda kudyidzana kunobatsira mapato ese. Izvo hazvibatsire chete zvisina-purofiti uye zvakakosha zvikonzero asi zvakare zvinobatsira mabrandi kusiyanisa uye kutyaira bhizinesi. Icho chimiro chehukama hwehukama mutoro, umo mushandirapamwe wekusimudzira wekambani une chinangwa chechipiri chekuwedzera purofiti nekuvandudza nzanga. Ndokureva, kugadzira purofiti, zvigadzirwa zvine simba zvepasirese zvine zviwanikwa zvekusimudzira ruzivo rwemasangano asingabatsiri, uku vachisimudzira chigadzirwa chavo. Muenzaniso wakanaka weiyi ndeye Toms Shoes iyo yakavaka yakasimba mutengi inotevera uye mukurumbira wekudzorera nekupa yakasununguka peya shangu kune mumwe munhu anoda yekutenga kwese kweshangu kunoitwa nevatengi vavo.
11. Co-Branding Kushambadzira
Kushambadzira kushambadzira kunoreva kudyidzana pakati pemasangano maviri ane zvido zvakafanana nevateereri asi asiri vakwikwidzi vakananga. Ivo vanowana mukana kune vateveri veumwe neumwe kuburikidza nekubatanidza kushambadzira kushambadzira. Izvo zvinobatsira iwo maviri mabrandi zvakanyanya pavanouya pamwechete, kwete pane pavanosimudzirwa wega. Inogona kuve nzira inoshanda yekuvaka bhizinesi, kusimudzira kuziva, uye kupinda mumisika mitsva.
12. Kushambadzira Kushambadzira
Kushambadzira kushambadzira kwakagadzirirwa kukurudzira mutengi mukutenga. Inosanganisira zvinokurudzira zvakasiyana zvakaita sekubviswa kwenguva pfupi, makuponi, kumusoro-kutengesa. Chinangwa chekushambadzira kushambadzira ndechekuwedzera kukwezva kwayo kuti ibudise kutengesa. Uye kushambadzira kwekushambadzira kune mukana wekuve wakakosha kune vese vatengi vatsva uye vatengi varipo. Iyo inopa vatengi vatsva chikonzero chekuyedza chigadzirwa kekutanga uchivaka kuvimbika mune varipo vatengi.
Tags cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, cjdropshipping shopify, content marketing, dropshipping, kudonhedza kushambadzira, tsambambozha Marketing, facebook ads, FB kushambadzira, nzira dzekutengesa
← Ungawana Sei KOL Kuunza Traffic Ku Chitoro Chako? → Maitiro Ekudzora Yako Chitoro Chekutengesa Kusiya?